Nayakhabar.com: के थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदीलाई लेखेको पत्रमा ? उपप्रम निधिले संसद्‍मा अव सबैकुरा ओकले
के थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदीलाई लेखेको पत्रमा ? उपप्रम निधिले संसद्‍मा अव सबैकुरा ओकले
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष दुतको रुपमा भारत भ्रमणमा गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रमले मोदीलाई लेखेको पत्रबारे संसदलाइ जानकारी गराएका छन्। उनले आफ्नो भारत भ्रमणका विषयमा संसदलाई जानकारी दिने क्रममा पत्रको विषयमा समेत जानकारी गराएका हुन्।
के थियो पत्रमा ?
निधिका अनुसार पत्रमा नयाँ सरकारले लिएको विदेश नीतिबारेु उल्लेख थियो जसमा छिमेकी मुलुकको सम्बन्धलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएकोु विषय थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले निधिलाई विशेष दुत तोकेको विषय पनि उल्लेख थियो।
निधिका अनुसार पत्रमा परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा उच्चस्तरीय भ्रमणमार्फत् सम्बन्ध उच्च स्तरको बनाउने विषयमाु थियो। त्यस्तै पत्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसकालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको पूर्ण विश्वास र समर्थन पाउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो।
मोदीलाई प्रचण्डको पत्र हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै निधिले उच्चस्तरीय भारत भ्रमणको माध्यमबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध सम्बर्द्धन गर्न ठोस कदमहरु चाल्नेबारे विचारहरुको आदान प्रदान हुने आशाु, पत्रमा गरिएको सदनलाई जानकारी दिए।
निधिले यही भदौ २ गतेदेखि ७ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए। निधिले भारत भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपालका राष्ट्रपतिको तर्फबाट प्रेषित निमन्त्रणालाई नवीकरण गरिएको पत्र हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए।
भारतीय राष्ट्रपतिलाई आफूले राष्ट्रपतिको तहमा भ्रमण नभएको विषयमा उल्लेख गरेको उनले बताए।
भारतका विदेश मन्त्री र भारतका पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि आफूले भेट गरेको उनले बताए। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्थन गर्ने नेता र अगुवासँग पनि भेट भएको थियो। नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा छलफल भएको थियो। नयाँ सरकारको प्राथमिकता संविधान कार्यन्वयन गर्नु रहेकाले सबै पक्षलाई साथमा लिई अगाडि बढ्ने नीति सेयर गरेको थिएँ, उनले भने।
आफूले भारतमा नेपालको सरकार तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा अगाडि बढेको चर्चा गरेको बताए। ुभारतको उच्च आर्थिक प्रगतिबारे नेपालले लाभ लिन चाहेको विषयमा जोड दिएको थिएँ, उनले भने।
भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नेपालका राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्रीका भ्रमण सम्पन्न तुल्याउने विषयमा पनि कुरा भएको निधिले उल्लेख गरे।